Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - Hypothalamus psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2008) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ
Zhonghua နန် Ke Xue ။ 2008 Jul;14(7):602-5.
ဝမ် T က1, လျူ B ကို, ဝူ ZJ, ယန်ခ, လျူ JH, ဝမ် JK, ဝမ်စင်ကာပူဒေါ်လာ, ယန် WM, သငျတို့သ ZQ.
ပြဿနာရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအကြောင်းရင်းများနှင့် pathophysiological ယန္တရားအချို့သဲလွန်စရဖို့သကဲ့သို့ psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့လူနာ hypothalamus ဇီဝြဖစ်၏အပြောင်းအလဲများကိုလေ့လာရန်။
psychogenic ED နှင့်4ခြောက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း hypothalamus ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ cerebrum ရေတွက်ဖို့အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွပြီးနောက် fluorine တို့-18-fluorodeoxyglucose (18 က F-FDG) ၏အာရုံစူးစိုက်မှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်လက်ဝဲများ၏အချိုး (ညာ) hypothalamus ရေတွက်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
Audiovisual လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများတွင် ၁၈F-FDG ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည် (လက်ဝဲ - ၁.၀၂၆ +/- ၀.၁၁၁၅ နှင့် ၂.၄၀၀ +/- 18; ညာဘက် - 1.026 +/- 0.115 против 2.400 +0.210, P <1.003) သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED လူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ( လက်ဝဲ: 0.187 +/- 2.389 vs 0.196 +/- 0.05; လက်ျာ: 2.781 +/- 0.156 vs 2.769 +/- 0.223, P> 2.809) ။
Psychogenic ED ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး functional ဖြစ်စေရောဂါမဖြစ်မည်အကြောင်း, အဆိုပါ hypothalamus ပြဿနာများ၏ pathophysiology တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။